Archdiocese of Mandalay blog: September 2012
စာအုပ်စာပေ ဖတ်ရာ ၀ယ်
ငယ်ငယ်ကတည်းက စာအုပ်စာပေ ကောင်းများနှင့် အကျွမ်းတ၀င် ရှိခဲ့ကြတဲ့ လူများကို ကံကောင်းတယ်လို့ ခေါ်ရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာအုပ် ကောင်း ဖတ်ခြင်း၊ စာပေဗဟု သုတရှာဖွေခြင်း ဟူသမျှ တို့ဟာ၊ လူ့ရဲ့ စိတ်ကို ပုံသွင်းပြုပြင်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်နှလုံးကိုလည်း ရွှင်လန်းစေနိုင်တယ်။ လေးနက်တဲ့ စာကြီး၊ ပေကြီးများ ဖတ်ခြင်းကို လေးလံလှတဲ့ တာဝန်ကြီး တစ်ရပ်လို့ မမြင်ဘဲ၊ အပန်းဖြေတဲ့ သဘောယူဆပြီး ကိုင်တွယ်လိုက်ရင် ပေါ့ပါး လာကာ၊ စိတ်ဝင်စား လာတာကို တွေ နိုင်ကြမယ်။ စာဖတ်ခြင်းဟာ လူကို တည်ဆောက်ပေးတယ်။ စဉ်းစားဆင်ခြင် ခြင်းဟာ လူကို အဆင်သင့်ဖြစ်စေတယ်။ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့ အရာကို ဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းဟာ လူကို ပို ပြီး မြောက်စေနိုင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ စာအုပ်များ ဖတ်ရှု့ပြီး မ ကောင်းတဲ့ ဆင်ခြင် ယူဆချက်များကြောင့် ကမ္ဘာမှာ မကောင်းတဲ့ ကြံစည် လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပေါ် လာတယ်ဆိုတာကို၊ နာဇီ ဂျာမနီရဲ့ ဟစ်တလာ နှင့် ကွန်မြူနစ် ရုရှားရဲ့ လီနင်တို့က သက်သေထူ နေသလို ၊ကောင်းတဲ့ ဆင်ခြင် ဖတ်ရှု့မှုဟာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်များ ကိုဖြစ်ပေါ် စေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို၊ Jesus ဂိုဏ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်မြတ် Ignatiusက သက် သေပြ နေပါတယ်။
“ကလောင်သွားသည် သံလျက်သွား ထက် ထက်၏။” ဆိုတဲ့ အချက်အရ စာပေအရေး အသားရဲ့ အစွမ်းဟာ ထက်မြတ် လှပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာကောင်းရာ မြတ်ရာကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မ ကောင်းတဲ့ အရေး အသားများ၊ မဟုတ် မမှန်တဲ့ သတင်းများ ကြောင့် ကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ သိက္ခာကျ ဆင်းရသလို၊ အများအကျိုးကို မကြည့် အနည်းစု အကျိုးသာ ကြည့်သူများကြောင့် တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံး ပျက်စီး ရတယ်ဆိုတာကို ရာဇ၀င် သမိုင်းများက ဖွင့်ဆို ထားပါတယ်။
ဘယ် အရေးအသား၊ ဘယ် အပြောအဆိုကို လက်ခံ ယုံကြည်ရမလဲဆိုရင် မှတ်ကျောက် တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ မှတ်ကျောက်ကတော့ - ၎င်းင်း အပြောအဆို အရေးအသားဟာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက် (သို့) လူနည်းစုရဲ့ ကောင်းစား တည်တံ့မှုကိုပဲ အားပေး နေသလား။ သို့တည်းမဟုတ် လူအများစုရဲ့ အကျိုးကို သယ်ပိုးဘို့ ရှေ့ရှု နေသလား ဆိုတာနှင့်ပဲ လက်မခံသင့် ခံသင့်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ် ရပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ် ပရိတ်သတ် အ ပေါင်းကောင်း သော စာပေများကိုရွေးချယ် ဖတ်ရှု့နိုင်ကြပြီး စာပေ၏ အကျိုးကို မြည်းစမ်းနိုင်ကြပါစေ ......
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:30 PM0comments
အလုပ်လုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အမှုကိစ္စ တစ်ခုခုလုပ်ကိုင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ကျွန် တော်တို့သည် ဆုံးရှုံးခြင်းကိုတွေ့ကြုံရမည် ဖြစ်သလိုအောင်မြင်ခြင်းကိုလည်းတွေ့ ကြရမည် ဖြစ်သည်။ အချို့လူများက ဆုံရှုံးခြင်းတွေ့ ကြုံ သောအခါ လက်လျော့သွားပြီး မိမိလုပ်ကိုင် သော အမှုကိစ္စကို ဆက်မလုပ်ဘဲနောက်ဆုတ် အရှုံး ပေး သွားတတ်ကြသည်။ အချို့လူများက ဆုံးရှုံးခြင်း ကိုတွေ့ ကြုံရသော်လည်း စိတ်လျော့ အားပျက် ခြင်းမရှိဘဲအောင်မြင်ခြင်းကို ရယူကြသည်။ ကျွန် တော်တို့ ဘ၀ အသက်တာတွင် ဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲ တွေ့ကြုံရမည် မဟုတ်ပါ ။အောင်မြင်ခြင်းကို လည်းတွေ့ကြုံ ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆုံးရှုံး ခြင်းကို တွေ့ကြုံရသော အခါ အားလျော့ စိတ်မပျက်သင့်။ အောင်မြင်ခြင်းရမည် ဟူသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဇွဲ၊ လုံလ၊ ၀ီရိယများနှင့် အားလျော့ စိတ်ပျက်ခြင်း မရှိပဲ၊ မိမိ ရည်မှန်းထားသော ရည်ရွယ်ချက် ပန်း တိုင်သို့က်ေအောင်လျှောက်လှမ်း သင့်သည်။ ကျွန်တော်တို့ သည်အောင်မြင်ခြင်းကို ပဲရမှာ မဟုတ်သလို၊ ဆုံးရှုံးခြင်းကိုလည်း အမြဲတမ်း ရမည် မဟုတ်ပါ။ အောင်မြင်ခြင်း မရောက်ခင်ကာလ အ တွင်း ဆုံးရှုံးခြင်းအရာ ကိုလည်းတွေ့ကြုံ ရနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် စိတ်ပျက် ခြင်း မရှိသင့်၊ လက်လျော့ခြင်း မရောက်သင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာတွင် အောင်မြင်ခြင်းကိုပဲ အမြဲတမ်းရနေလျှင်လည်း မကောင်းပါ။ ဆုံးရှုံး ခြင်းကိုပဲ ရနေလျှင်လည်း မကောင်းပါ။ အသက်တာတွင် ဆုံးရှုံးခြင်းကို ရောအောင်မြင်ခြင်းကိုပါ ကျွန်တော်တို့ ရရှိသင့်သည်။ သို့မှသာ အောင် မြင် ခြင်းသည် ဘာကြောင့်အောင်မြင် ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိပြီး ၊အောင်မြင်ခြင်းကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆုံးရှုံး ခြင်းကိုတွေ့ကြုံရသည့် အခါတွင်လည်း ဆုံးရှုံး ခြင်းသည် ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဆုံးရှုံးသည်ကို သိပြီးအောင်မြင်ခြင်းကို ဘယ်လိုရောက်ရှိအောင် ပြုလုပ်မည်ကို သိရှိနိုင်မည်။
အမှုအရာ ကိစ္စများ လုပ်ဆောင် သမျှတိုင်းတွင် အောင်မြင်ခြင်းရော၊ ဆုံးရှုံးခြင်းရော ရရှိနိုင်သည် ။အောင်မြင်ခြင်း ရော၊ ဆုံးရှုံးခြင်းပါတွေ့ကြုံမှသာ၊ ကျွန် တော်တို့အ နေဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အရသာရော ဆုံးရှုံးခြင်း အရသာပါ ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင် ခြင်းကိုပဲ ရရှိ ခံစားနေလျှင်၊ အောင်မြင်ခြင်း ခံစား ရသော သူသည် ဆုံးရှုံးခြင်း အရသာကို မခံစား တတ်တော့ပဲအောက်ခြေလွတ်ကာ၊ ဘ၀တွင် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် တသီတတန်းကြီး တွေ့ကြုံ သွား နိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန် တော်တို့ ဘ၀ အသက်တာတွင် ဆုံးရှုံးခြင်းကို အရင်တွေ့ကြုံ ခံစားပြီးမှ အောင်မြင်ခြင်းကို ရယူ ခံစားလျှင် ပို၍ ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်လှေကားလိုပင် တစ်ဆင့်ခြင်း တက်မှသာအောက်ခြေ မလွတ် နိုင်။ သို့မဟုတ်ပဲ အဆင့် ကျော်တက်ပြီး တစ် ဆင့်ခြင်း မတက်လျှင် ၀ရုန်းသုန်းကားနှင့်အောက် ခြေလွတ်ပြုတ်ကျ သွားနိုင်သည်။
ထိုကြောင့် အောက်ခြေ မလွတ်အောင် ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်အောင် မြင်ခြင်းကို ရယူ သင့်သည်။အောင်မြင်ခြင်းဆို ရာ၌လည်းနိုင်ငံကျော် အဆိုကျော် ရုပ်ရှင် သရုပ် ဆောင်၊ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင်၊ နာမည်ကျော် စာ ရေးဆရာ ၊ဘောလုံးသမား စသည့်နိုင်ငံကျော်၊ ကမ္ဘာကျော် လူများဖြစ်မှသာ အောင် မြင်ခြင်းကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဟု မယူဆ သင့်ပါ။ မိမိလုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်တွင် သစ္စာရှိစွာ ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေလျှင်၊ မိမိတို့ အတွက်အောင်မြင် သော အသက်တာပင်ဖြစ်သည်။ မိမိ ရှိနေသော နေရာ၊ မိမိ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်ကိစ္စလေးပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ဘုရားရှေ့ လူရှေ့တွင် သစ္စာရှိစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်လျှင် ဤအလုပ်ကိစ္စသည် မိမိအတွက် အောင်မြင်ခြင်း အသက်တာပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ကအောင်မြင်ခြင်းကို အသက် ငယ်ရွယ်စဉ် ဆယ်ကျော်သက်တွင် ရယူ လိုကြသည်။ အ သက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အောင်မြင်ကျော်ကြား သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရှိကြပါသည်။ သို့သော် အောင်မြင်ခြင်းက ဆယ် ကျော်သက် အရွယ်တွင်သာ ရယူနိုင်သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို မဆုံးဖြတ် ထားသင့်ပါ။
ရေသောက်လိုလျှင်ရေတွင်း တူးရမည်။ ယခုရေတွင်းတူး ယခု ရေကြည်သောက်၍ လည်းမရပါ။ အချိန်ကာလကိုလည်း ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ခြင်းကို ရဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေ ဖြင့်ပြင်ဆင် ရမည့် အချိန်တွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေ ဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းကို တရွေ့ရွေ့ အားဖြင့် ရယူလျှင် ငါကတော့အောင်မြင်ခြင်းကို စိတ်ရှည် လက်ရှည်ဖြင့် ရယုမည်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်ခြင်းကို သူတစ်ပါးက ရယူ သွားလျှင်လည်း၊ ငါကတော့ အောင်မြင်ခြင်းကို မရနိုင်ဘူးဟု လက်လျှော့ကာ စိတ်မပျက်သင့်။ သူတစ်ပါးအောင်မြင်ခြင်း ရသလို၊ ငါကလည်း ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းကို မရနိုင်ရမှာလည်း ဟုဆိုပြီး၊ စိတ်ပျက် အားလျှော့ခြင်းမရှိဘဲ ကြိုးစားပြီး၊ အောင်မြင်ခြင်းကို သူတစ်ပါး ရယူသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရယူ သင့်သည်။ အားလျှော့ စိတ်ပျက်ခြင်းများ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားထဲတွင် မထည့် ထားလိုက်ပါနှင့်။ ထည့်ထားလျှင် အောင် မြင်ခြင်းနှင့် ဝေးကွာ သွားပြီး ဆုံရှုံးခြင်းကိုသာ ကျွန်တော်တို့ အနေနှင့် ပိုင်ဆိုင် သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားတွင် အောင်မြင်ခြင်းကို ရကို ရရမည်ဟူသော အသိ စိတ်ထားကို ထည့်ထား သင့်ပါသည်။
ဖိလိပ္ပိ ၄း၁၃ တွင် “ငါ့ကို ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံ တော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်း သော အမှုတော်ကို ငါ တတ်စွမ်းနိုင်၏။” ဟု ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွန်အားပေး သတိပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် အမှု ကိစ္စဆောင်ရွက်သည့် အခါ ခရစ်တော်တည်း ဟူသောယေဇူးကို အားကိုးပြီး လုပ် ဆောင်သင့်သည်။ သခင်ယေဇူး ခရစ်တော်က ကျွန် တော်တို့ မလုပ်နိုင်သော အမှု ကိစ္စကို၊ လုပ်နိုင်သော ခွန်အား အစွမ်းသတ္တိကိုပေးမည်ဟု ကတိပေးထားပါသည်။ သခင်ယေဇူး ခရစ်တော်ပေးတဲ့ အစွမ်း တွေအားဖြင့် ခပ်သိမ်း သော အမှုအရာ တို့ကို လုပ် ဆောင်နိုင်ပြီင်္းအောင်မြင်ခြင်းကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆုံးရှုံး ခြင်းကို ရရှိ ခံစားရလျှင်လည်း ခံနိုင် သော ခံနိုင်ရည် အစွမ်းသတ္တိကို ခရစ်တော်က ပေးစွမ်းပါ လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် ခပ်သိမ်းသော အမှုအရာတွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ သခင် ယေဇူး ခရစ်တော်ကို အားကိုးပြီး အသက်ရှင် လျှောက် လှမ်းရင်း သခင်ယေဇူး ခရစ်တော်က ခွန်အား အစွမ်းသတ္တိကို သင့်အားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးခြင်းမှ အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရယူ ပိုင်ဆိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကိုရေးသား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:13 PM
“ဘုရားရှင်၊ ကျွန်ုပ်ကိုခေါင်းဆောင် ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက် ပေးတော်မူပါ ဘုရား။”
ဖျားနာနေသော ကမ္ဘာမြေကြီးကို စောင့် ရှောက်ဖို့ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်လို နေပါသည်။
ဆင်းရဲချို့တဲ့ သူများနှင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ အတွက်၊ ဖိနှိပ်ခံ လူသားများ အတွက်၊ အားနည်းသူများ၏ အသံကို နားထောင်နိုင် သောသူ၊ သူတို့ကို အပြုံးလေး တစ်ပွင့်ဖြင့် ရွှင်လန်း စေသူ၊ ဘုရားရှင် ကိုယ်စား လူသားများကို စောင့် ရှောက်နိုင်သော သူ ဖြစ်ချင်ပါသည်။
ဘုရားရှင် လူများအတွက် လမ်းဖြောင့် လမ်းမှန်ကို ပြပေးသော ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်၊
လူများအတွက် လှပသောပြည့်စုံ သော ဘ၀များကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သောခေါင်းဆောင်၊
စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေရတနာများကို မမက် မော နိုင်သော ခေါင်းဆောင်၊
ဘုရားရှင်၏နှုတ်တော်ထွက် စကားကို လေးစား လိုက်နာသောခေါင်းဆောင်၊
ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းထဲမှ မိုးဇယ်ကဲသို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါသည်။
မိုးဇယ်ကဲ့သို့ လူများအတွက် အစာရေစာနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းကို ရှာဖွေပေးနိုင်သည့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အနစ်နာခံ၍၊ အများအတွက် ဦးစားပေး တတ်သောခေါင်းဆောင်၊
ဘုရားရှင်၏ နှုတ်တော်ထွက်စကား အတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးသောသူ၊ ဘုရားရှင် ရှေးဟောင်း ကျမ်းစာထဲမှ ဒယ်ဘရာ (Debrah) ကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်၊
သူမ၏ တိုင်းသူပြည်သားများ အတွက် အမှန်တရားနှင့် တရားမျှ တမှုကို ရှာဖွေပေးခဲ့သူ၊
ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရရန်၊ ပင်ပန်းကြီးစွာနှင့် သူမ၏နိုင်ငံအတွက် ကြိုးပမ်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ ၊
ဘုရားရှင်၏ နှုတ်တော်ထွက် စကားကို လိုက်နာကျင့် သုံးသောသူ ၊
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ဘုရားရှင်ကဲ့သို့ သော တစ်ဘ၀လုံးကို အများအကျိုး အတွက် အသက်ပေး စွန့်ခဲ့သူ၊
ကိုယ့်အတွက် အစေ မခံခိုင်းဘဲ အများအတွက် အစေခံခဲ့သူ၊
“ဘုရားရှင်၏နှုတ်တော်ထွက် စကားကို တစ် သွေမသိမ်း လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သူ ”
ယေဇုးရှင် ကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင် ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ရန် အင်အား ပေးသနားတော် မူပါ ဘုရား။
Taken from yeast Tako philippines / special Issue August 10
On the Death of Bishop Claver S.J
Beloved of Christ ( Volume 8.No.5)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:56 AM
ဥပဒေ၊ ပညတ်၊ စည်းကမ်း
“ ဥပဒေတွေ၊ ပညတ်တွေ၊ စည်းကမ်း တွေဟာ လူတွေကို ကျဉ်းကြပ်စေတယ်” ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ကြားဖူးကောင်း ကြားဖူးမှာပါ။ သူတို့က ဥပဒေတွေ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ချုပ်နှောင်ဘောင် ခတ်ထားရင် လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိနိုင်မလဲလို့ စောဒက တက်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒီလို အ တွေးအခေါ်မျိုး ၀င်လာလျှင် မှားပေလိမ့်မည်။
ဥပဒေ ကင်းမဲ့ ထင်ရာဆိုင်းခြင်းဟာ လွတ်လပ်မှုလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ မင်းမဲ့ စရိုက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သြတ္တပ္ပစိတ်က ဘယ်အရာမှန်တယ် လုပ်ပါ။ ဘယ်အရာ မှားတယ်၊ မလုပ်နဲ့လို့ အမြဲတမ်း လမ်းညွှန်နေပါတယ်။ မှန်တဲ့ အ ပြုအမူတွေကို မှားတဲ့ အပြူအမူတွေနဲ့ ခွဲခြားဘောင် ခတ်ပေးထားတာဟာ ဥပဒေတွေ ပညတ် တော် တွေပါပဲ။ ဥပဒေတွေ ပညတ်တော်တွေ ဘောင်အတွင်းမှာ ပြုမူ နေထိုင်မှသာ လွတ်လပ်မှုလို့ ခေါ် ဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
သင်တို့သည် ငါဟောပြော သွန်သင်သည့် အတိုင်းပြုကျင့် ကြလျှင် ငါ၏ တပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏။ သမ္မာတရားကိုလည်း သိသဖြင့် ထိုသမ္မာတရားသည် သင်တို့အား လွတ်လပ်စေလိမ့်မည်၊၊ (သံယောဟန်၈း၃၂) ခရစ်တော်ဟောတဲ့ တရား၊ ခရစ်တော် ပေးတဲ့ ပညတ်များကို လိုက်နာ ကျင့်ကြံခြင်းသည် လွတ်လပ်မှုကို ရရှိ စေမှာဖြစ်တယ်။
တစ်နေ့ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝတဲ့ လူငယ် တစ် ယောက် ခရစ်တော်ထံ အပြေးကလေး ချဉ်းကပ်ပြီး “ကောင်းမြတ်တော်မူသော ဆရာသခင် ထာဝရအသက်ကို ရအံ့သောငှာ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ ပြုရပါမည်နည်း”လို့ မေးလိုက်တယ်။ ခရစ် တော်ရဲ့ အဖြေက သူတစ်ပါး ပစ္စည်း၊ သူ့သား မယားကို လိုချင် တပ်မက်မှု မရှိစေနှင့်၊ သူ့ဥစ္စာ မခိုးနဲ့။ မမှန်တဲ့ သက်သေမခံနဲ့၊ လိမ်လည်မှု မလုပ်နဲ့၊ မိဘတို့ကို ရိုသေပါလို့ အဖြေပေးခဲ့ တယ်။ (သံမာရ်ကူး ၁၀း ၁၇-၁၉)
ခရစ်တော် လုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေက ပညတ်တော်(၁၀)ပါးဟာ လိုက်ကျင့်ရန် မဟုတ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေလည်း မကြာခဏ ကြား နေရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆင်ခြေက၊ လောကလူသားတွေ အားလုံးလိုလို ပညတ်တော်(၁၀) ပါး ထဲက တစ်ပါးပါးကို ကျူးလွန် ချိုး ဖောက်နိုင်တယ်။ အားနည်းတဲ့ လူသားတွေဟာ ဒီပညတ်တွေကို မကျင့် ကြံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပညတ်တော် တွေဟာ စံတစ်ခု သာဖြစ်တယ်။ လိုက်ကျင့်ရန် မဟုတ်ဟု ဆိုပြီး တစ်ဖက်စွန်း ၀ါဒီတွေဖြစ်ကုန် ကြတယ်။
““ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ လူသား တွေကို အကြံပြုချက် (၁၀) ချက်ပေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညတ်ချက် (၁၀) ချက်သာလျှင်”” ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က အစွမ်းကုန်လိုက် လျှောက်မှသာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေရင် အိမ်စည်းကမ်းကို လိုက်နာ ရတယ်။ ကျောင်းမှာ ကြတော့ကျောင်းစည်းကမ်း ဆိုတာ ရှိလာရော၊ ဈေးမှာ၊ ရုံးမှာ၊ နေရာတိုင်း သူ့ စည်းကမ်းနဲ့ သူ ရှိကြပါတယ်။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူသားအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဥပဒေဆိုတာ ရှိတယ်။
သင်ဟာ ဘယ်ဘာသာပဲ ကိုးကွယ်ပါ စေ။ မကောင်းမှုကို ကျူးလွန်ရင် စိတ်နှလုံးငြိမ် သက်မှု မရှိနိုင်ဘူး ။ပျော်ရွှင်မှုနဲ့လည်း ကင်းဝေး ရ လိမ့်မယ်။ ပညာတတ်စရာ မလိုပဲ ဘယ်အရာ ကောင်းတယ်။ ဘယ်အရာ မကောင်းဘူး ဆိုပြီး အလိုအလျောက် သိရှိနေခြင်းက၊ ဘုရားသခင် လူတိုင်းကိုမွေးကတည်းက သြတ္တပ္ပစိတ် ထည့် ပေးလိုက်လို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင် ပညတ်တော် (၁၀)ပါးကို မလိုက်ကျင့်လို့ ရပေမဲ့ ၊ သင့်ရဲ့ သြတ္တပ္ပစိတ်ထဲမှာ ဘုရားပေးလိုက်တဲ့ ပညတ်တော် ၁၀ပါးကို ဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
“ဖာရီရှဲတို့နှင့် ယုဒ လူအပေါင်းတို့သည် ရှေးထုံး လမ်းအစဉ်အလာများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးကြတယ်။ လက်ကို မဆေးပဲ အစာစားလေ့ မရှိကြ။ ဈေးမှဝယ်ယူသည့် အရာအားလုံးကိုလည်း မဆေးကြောဘဲ မစားကြ။ အိုးခွက်ကြေးဖလားများကိုဆေးကြောနည်းမှ စသော ထုံးတမ်း အစဉ် အလာများကို သူတို့သည် လိုက်နာ ကျင့်ကြံ၏။ (ရှင် မာကူး ၇း၃-၄)
ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာရမယ့် ပညတ်တွေ ဥပ ဒေ တွေဟာ၊ ဖာရီရှဲတွေ ယုဒလူ တွေ လိုက်နာ ရမယ့် ဥပဒေသတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်၊ ဘာမှ မပြောပလောက် ပါဘူး။ ဒီလောက်များပြားတဲ့ ဥပဒေသ တွေကို ဂျူးတွေဟာ ၏၊ သည် မရွေး လိုက် လျှောက် နေကြပေ မယ့် ခရစ်တော်ဟာ သူတို့ကို ရှုတ်ချပြစ်တင် ခဲ့တယ်။
ဆိုလိုချင်တာက ဥပဒေကို ဘုရားအား ချစ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လိုက်လျှောက်ရန်၊ ဘုရားကို ပြုရမယ့် အမှုနဲ့ လူသားအချင်းချင်းပြုရမဲ့ အမှုတို့ဟာ တစ်လမ်းတည်းဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆန့်ကျင့်ဘက် မဖြစ်ရဘူး။ တစ်ခုက တစ်ခုကို တားဆီးမှု မဖြစ်ရဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်လောကကို ကြွလာစဉ်က လူသား တွေကို လိုက်ဖို့ ပညတ် နှစ်ခုပဲပေးထားပါတယ်။
(၁) ဘုရားကို အစွမ်းကုန် ချစ်ရန်နှင့် (၂) လူသားအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာ တရား ရှေ့ထားပြီး ချစ်ပါလို့ မိန့်ခဲ့တယ်။ ဘုရားကိုပဲ ချစ်ရင် လုံ လောက်ပြီ။ လူသား အချင်းချင်း ချစ်စရာ မလိုလို့ ခရစ်တော် တစ်ခါမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက သင့်ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမနဲ့ အရင် သင့်မြတ်အောင်ပြုပါ ။နောက်မှ ဘုရားကိုပြုရမည့် အမှုကို ပြန်ဆက်လုပ်လို့ မိန့်မှာ ထားခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ သဘောက လူသားအချင်း ချင်း သင့်မြတ်မှု မရှိသေးရင်၊ ဘုရားအပေါ် ပြုရမည့် ဂုဏ်ပြု ချီးမွမ်းခြင်းများပြုဖို့ မကြိုးစားနဲ့လို့ ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (မာတေဦး ၅း၂၃-၂၄) ကိုယ်က သူတစ်ပါးရဲ့ အပြစ်တွေကို ခွင့်မလွှတ် သေးပဲနဲ့ ဘုရားသခင်ထံ မိမိ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ဖို့ မ တောင်းလျှောက်နဲ့။ (မာတေဦး၆း၁၂) ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ စိတ်မမွေးနိုင်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ မေတ္တာ ဆိုဘို့ မကြိုးစားနဲ့လို့ ခရစ်တော် ဆိုလိုခြင်းပဲ။ သင် အဲဒီလို သင့်ညီအစ်ကိုကို သင့်ရဲ့နှလုံးသားကနေ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပဲကောင်းကင်ဘုံ၌ မေတ္တာ ဆိုရင် “ဤလူမျိူးသည် ငါ့ကိုနှုတ်အားဖြင့်သာ ဂုဏ်ပြု ချီးမွမ်းကြ၏။ သူတို့၏နှလုံးသားသည် ငါ့ထံမှဝေးလေစွ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ သင့်ကို တိုက်ရိုက်ပြောနေသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက ဥပ ဒေတွေ၊ ပညတ်တွေဟာ ထုတ်ပြန်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။ ဥပမာ ဂျူးလူမျိူးတို့ရဲ့ အပြင်ကပြန်လာတိုင်းခြေလက် ဆေး ကြော သန့်စင်ခြင်း ဥပဒေဟာ၊ ကျန်းမာရေး ရှု့ဒေါင့် ကြောင့်ဖြစ်လာ ရတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်က မိမိရဲ့ ၀ိညာဉ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုရှေ့ရှု လိုတာကြောင့် ဒီဥပဒေဟာ ဖြစ်ပေါ် လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယုဒတို့ဟာ ဥပဒေကို တသွေမတိမ်း လိုက်လျှောက်ခြင်းအား ဖြင့် အဲဒီ ဥပဒေရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ပျောက်သွားတတ် ပါတယ်။ ဥပဒေတွေမှာ ချို့ယွင်းချက်လေးတွေရှိ တတ်တယ်။ ဥပဒေတို့ ပညတ်တို့ဟာ လူတွေအတွက် ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်လို့ လူတွေအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ် လာရင် လူကို ဦးစားပေးရှေ့တန်းတင် ရလိမ့်မယ်။
ဒီအကြောင်းကို ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင် ဥပဒေနဲ့ ပြဿနာမှာ အတိအလင်း ပြောထားခဲ့တယ်။ (လုကား ၆း၁-၅) ဥပုဒ်နေ့ တစ်နေ့ တပည့်တော်တွေ ဂျုံခင်းထဲက ဖြတ်ပြီး ခရီးသွားနေစဉ်၊ ဗိုက် အရမ်းဆာလို့ ဂျုံစပါးနှံတွေက ဂျုံစပါး တွေကို ဆွတ်ချွေပြီး စားနေတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့ ဖာရီရှဲ အချို့ဟာ၊ ဥပုဒ်နေ့မှာ စပါးစေ့ချွေပြီး အခွံလွှာတာလည်း အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဥပုဒ် နေ့မှာ အလုပ်မလုပ်ရလို့ တားမြစ်ထားတဲ့ ကြားက သင့်ရဲ့ တပည့်တွေ ဥပုပ်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆို ကြတယ်။ ခရစ်တော်က ဥပမာနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ ဒါဝိတ်မင်းရဲ့ အပေါင်းအပါ အချို့ ရဟန်းများသာလျှင် စားခွင့်ရှိတဲ့ မုန့်ကို ဆာလောင် မြွတ်သိပ်မှုကြောင့် စားသုံးခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါလား ဆိုပြီး ပြန်လည်ချေပ ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါက ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး နေ့ စဉ် မစ္ဆားတရားတော်ကို တစ်ရက်မှ နောက်ကျ လေ့မရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ မစ္ဆားတရားနောက်ကျတာကို မကြိုက်လို့ အမြဲ စောစော သွားလေ့ ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ အိပ်ယာထ နည်းနည်းနောက်ကျလို့ ဘုရားကျောင်းကို သုတ်သုတ် သွားနေစဉ် လမ်းမှာ ဆင်းရဲသား တစ်ဦး အကူအညီတောင်းတာနဲ့ ကြုံတွေ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ အခက်အခဲ တင်ပြမှုကို နားထောင်နေရင်၊ ဘုရားကျောင်း သေချာပေါက် နောက်ကျမှာ သိတဲ့ ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဆင်းရဲသား အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ပဲ ဘုရား ကျောင်းကို အပြေးကလေး သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းနောက် မကျလိုတဲ့ အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးဟာ၊ တစ်မိနစ်စောပြီး ဘုရား ကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရား ကျောင်း တံခါးပိတ်ထားတာ ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဆွဲဖွင့်ပေမဲ့ ပွင့်မလာခဲ့ဘူး။ တံခါးခေါက်ဖို့ လက်ကို ရွယ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ စာတန်း တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စာတန်းက “ငါဟာ အ ပြင်မှာ ရှိတယ်။” လို့ ရေးထားတာကို တွေ့လိုက် ရတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:18 PM
ခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့ အရသာနှင့် အနှစ်သာရကို မြည်းစမ်း ဖူးကြပါသလား။ ခွင့်လွတ်နိုင်ကြသူများ အကြောင်း ကိုရော ကြားဖူးကြပါ သလား။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော်က ရဟန်းမင်း ကြီးယောဟန်ပေါလူးကို မာမက်အလီအဂ္ဂါ မှသေနတ်နှင့် အကြိမ်များစွာ ပစ်ခတ်ပြီး သေကြောင်း ကြံစည် ခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့ သော် ရဟန်းမင်းကြီး မသေဆုံးခဲ့ပါ။ ဒဏ်ရာများနဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးကုသ ခံယူခဲ့ရှာသည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းလာသော အခါ ခရစ္စမတ်နေ့၌ ရောမမြို့တော်၏ အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲသို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။ သူ့ကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ အလီအဂ္ဂါ၏ အခန်းလေးထဲ၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စကားများပြောဆိုခဲ့ပြီး "င့ါသား သင့်ကို ငါ ခွင့်လွှတ်သည်"ဟုပြောဆို ခဲ့ပါသည်။ ၉/၁၁ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံကြီးနှစ်ခု ကို အိုစမာဘင်လာဒင်နှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါများ တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်ကလည်း ရဟန်းမင်းကြီး မှ "ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားများ တရားမရှိလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိနိုင်ပါ။ ခွင့်လွှတ်ခြင်း တရား မရှိလျှင် တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ပါဟု မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖခင်ကြီး မဟတ္တမ ဂန္ဓီကြီး၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်း တရားသည်လည်း ထူးခြား ပါသည်။ ဂန္ဓီကြီး၏ အထုပ္ပတ္တိကို ရိုက်ကူးသော ဇာတ်ကားထဲ၌ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အဖေတစ်ယောက်မှ သူ၏ သားငယ်ကို မူဆလင် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် မှ သတ်လိုက် သောအခါ၊ သူကပြန်လည်၍ ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ဘဲ မူဆလင်ဘာသာဝင် ကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်ကို ဂလဲ့စားချေသည့် အနေနှင့်ပြန်လည်၍ သတ်ဖြတ် လိုက်လေသည်။ သို့သော် သူ၏ စိတ်ထဲ၌ သူပြုလုပ်မိသည့် အပြစ်မှာ ကြီးလေးလှကြောင်း စဉ်းစား မိသောအခါ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှု ကြီးစွာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံး၌ မဟတ္တမ ဂန္ဓီကြီင်္း ထံသွား ရောက်ခါ၊ အဖြစ်အပျက် အားလုံးကို ပြောပြလိုက်ပါသည်။ သူ ကျူးလွန်ခဲ့ သော အပြစ်မှာ ကြီးလေး လွန်းလှသည့် အတွက် မေ့မရနိုင်ဘဲ စိတ်ဆင်းရဲနေရကြောင်း သူ့ကို ဤ ဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းပေးပါရန် တောင်းပန် ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဂန္ဓီကြီးမှ သင့် စိတ်ချမ်းသာ လိုလျှင် မူဆလင် မိဘမဲ့ ကလေးငယ် တစ်ယောက်ကို သားအဖြစ် မွေးစားလိုက်ပါ၊၊ သို့သော် သင်ကိုးကွယ်သော ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကဲ့သို့ မကြီးပြင်းစေဘဲ၊ သူ့မိဘများ ကိုးကွယ်သော မူဆလင် ဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်၍ ကြီးပြင်းပါစေဟု အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သည်။
ထို ဟိန္ဒူလူမျိုးသည်လည်း ခဏတာမျှတွေဝေ သွားပြီးမှ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးမှ ဂန္ဓီကြီး၏ အဆိုအမိန့်ကို နာခံပါမည်ဟု အဖြေပေးပြီး စိတ်ပေါ့ပါးစွာနှင့် သူ၏ အိမ်သို့ ပြန်သွား ခဲ့ပါသည်။ သူ့ဘ၀မှာလည်း ဖြေသာ သွားပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု ရခဲ့ရှာသည်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်း ကြောင့် စိတ်ဒုက္ခ္ခရောက်ခဲ့ရသော်လည်း၊ ခွင့်လွှတ်နည်းကို သိသွားသော အခါ စိတ်ချမ်းသာ သွားခဲ့ရသည်။
အမေရိကန်ပြည်၏ ပထမဆုံး သမ္မတကြီးဖြစ်သူအေဘရာ ဟမ်လင်ကွန်း၏ ခွင့်လွှတ်နိုင် ခြင်းသည်လည်း စံတင် ထိုက်လှပါသည်။ အမေရိကန် လူမည်းခေါင်းဆောင် မာတင် လူသားကင်းမှ ဘုရား ကျောင်းကြီး တစ်ကျောင်း၌ တရား ဟော ပြောစဉ်က Now Abraham Lincon belongs to the Ages ခေါင်းစဉ်နှင့် သခင်ယေဇူး၏ အဆိုအမိန့်ဖြစ်သော "ရန်သူများကို ချစ်ပါ" ဟူသော ဘုရားရှင်၏ စကားကို အောက်ပါအတိုင်း တကယ့် အဖြစ်အပျက် တစ်ခု နှင့် ဥပမာ ပေး၍ဟောပြော ခဲ့ပါသည်။ သမ္မတကြီး၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်း သာမက သူ၏ မေတ္တာတရား ကြီးမားပုံကို ထင်ရှားစွာ တွေ့ မြင်နိုင် ပါသည်။
ထိုစဉ်က အမေရိကန်ပြည်တွင် သမ္မတ ရွေး ကောက်ပွဲပြုလုပ်နေချိန်ဖြစ်ပြီး လင်ကွန်းသည် လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်သည့် သမ္မတ လောင်းများထဲ၌ ပါဝင်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် လင်းကွန်းအကြောင်း အကောင်း မပြောဘဲ အ ဆိုးများကြီး ရှာကြံပြောသော စတန်တင် (Stanton) ဆိုသူ တစ်ယောက် ရှိခဲ့သည်။ သူသည်၊ အမေရိကန်ပြည် တစ်လွှားလျှောက်သွား၍ အေဘရာ ဟမ်ဟင် လင်ကွန်း မကောင်း ကြောင်းပြောကြား ခဲ့သည်။ သူပြောသည့် အကြောင်း အရာများထဲ "ဤလို ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်၊ ခါးကိုင်း အရပ်ရှည်ကာ၊ အသိဥာဏ် ကင်းမဲ့သော သူတစ်ယောက်ကို သင်တို့၏ သမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ်ကြမည်မှာ အဓိပ္ပာယ် လုံးဝ မရှိကြောင်း သူ့အား မဲမထည့် ကြပါနှင့်" ဟု လှည့်လည်ပြောဆို ခဲ့သည်။
အေဘရာဟမ် လင်ကွန်း သမ္မတကြီး ဖြစ်လာသောအခါ၊ (Mr. Stanton) ကို အမေရိကန် စစ်တပ်ကြီး၏ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သမ္မတကြီး၏ အကြံပေး အရာရှိကြီးများက၊ ဤမျှ ကိုယ့်ပေါ် မကောင်းပြောထား သော သူတစ်ယောက်ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ဤအရေးကြီးသော ရာထူးကို မပေးသင့်ကြောင်း ၀ိုင်းဝန်း တားဆီးခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ သမ္မတကြီးမှ "ကျွန်ုပ်ကို သူ မည်မျှ ဝေဖန် ရှုံ့ချခဲ့ကြောင်း သိပါသည်။ သို့သော် ဤရာထူးသည် သူနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း" ပြန် လည်ပြောကြားခါ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရာထူးကို (Mr.Stanton) မစ္စတာ စတင်တန်အား အပ်နှင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍သာ သူ့ကို ဤမျှ မကောင်းပြောထားသူအား မုန်းတီး နာကျည်းစိတ်ဖြင့် ဤရာထူးကို မပေးခဲ့လျှင် သူသည် ခွင့်မလွှတ်နိုင် သူတစ် ယောက်ဖြစ် သွားနိုင်သည်။ သို့သော် "ဘုရားသခင်က သင်၏ ရန်သူကို ချစ်ပါ" ဟူသော အဆိုအမိန့်ကို သူကလေးစားစွာ လိုက်နာ ခွင့်လွှတ်ကာ၊ ထိုရာထူးကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
မစ္စတာစတင်တန် (Mr.Stanton) မှလည်း သူ မည်မျှ မကောင်းပြောခဲ့သော်လည်း သမ္မတကြီး၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ပါရမီကို နားလည်သွားပြီး၊ လေးစားစွာဖြင့် သူ့ ရာထူး သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကား ဘုရားသခင်မှ အမေရိကန် သမ္မတကြီးမှ တဆင့်၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို မစ္စတာစတင်တန် နားလည်စေရန် ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အထွဋ်အမြတ်ထား သော ဘုရားသခင်၏ ကျမ်းစာထဲမှ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ဖော်ပြထားသော ကျမ်းပိုဒ်လေးများကို အနည်းငယ်ဖော် ပြ လိုပါသည်။
သူတစ်ပါး၏ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်လျှင် ဘုရားရှင်မှ သင်၏ ပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်လိမ့်မည် (မာတေဦး ၆း၁၄)
နှိမ့်ချ ယဉ်ကျေးစွာနှင့် ခွင့်လွှတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားရှင်မှ သင့်ကို အစဉ် အမြဲ ခွင့်လွှတ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ကော်လော် သဲ ၃း၁၃)
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကြင်နာသော နှလုံးသားနှင့် ချစ်ခင်လေးစားစွာ ဆက်ဆံကြပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၊ ဘုရားရှင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟူသော ကံကောင်း ခြင်း လက်ဆောင်ကို သင်တို့မှ ထာဝရ၊ ရရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (မာတေဦး ၁၁း၂၅ )
ရဟန္တာကြီး ပီတာမှ ဘုရားရှင်ကို "သူတစ်ပါးကို ခွင့်လွှတ်ရာ၌ မည်သို့ ခွင့်လွှတ်ရမည်နည်း" ဟုမေးသော အခါ၊ အကြိမ် (၇၇) နှစ်ကြိမ်ကို (၇) နှစ်လီ မြောက်သော အရေအတွက် နှင့် ညီအောင် ခွင့်လွှတ်ရမည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ (မာတေဦး ၁၈း၂၁)
အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာ ကြမည့် လူငယ်မောင်မယ်များ အားလုံး ခွင့်လွတ်ခြင်း တရားကိုနှလုံးပိုက်လျက် ကြီးမြတ် သောသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်....
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ဘုရားရှင်ထံ ထာဝ ရ အစေခံလျက်
Ref. Beloved of Christ Vol 8. N0 .6.
Forgiveness and Inner Healing ,by Betty Papscott and Father Robert De Grandis,
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:30 PM